Bandhigyada Magaalada iyo Bandhigyada Isgaarsiinta Basel -
Ma aha oo kaliya macaamiisheena ganacsiga - sidoo kale qoysaska iyo kooxaha ilaa dadka 7 - waxaanu bixinaa suurtagalnimada safar raaxo leh mid ka mid ah xayawaanka caadiga ah iyo kuwa xarrago leh on.
Gaar ahaan bilaha xagaaga Basel soo jiidata dalxiisayaasha badan kuwaas oo doonaya in la ogaado iyo magaalooyinka ku xeeran ee Switzerland, France iyo Germany. Sababtoo ah meelaheena aadka u fiican waxaan ka dhigi karnaa safarka magaaladaada sida ugu macquulsan. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisha ganacsiga our jecel yihiin in ay isticmaalaan fursad in la isu geeyo ganacsi oo lala yeesho qaybaha gaarka loo leeyahay iyo ha noo chauffeurs khibrad fog wehel ka account stress iyo dadkii badnaa dadweynaha iyada oo loo marayo tuulada iyo ma aha oo kaliya indhaha, laakiin sidoo kale hal ama laba Talooyin muuji.
Adeegga Limousine ee magaalooyinka ugu raaxeysan ee wadnaha ee Europe
Darawalkeena wuxuu kugu hagayaa adiga oo aan si fudud u rooneyn, laakiin sidoo kale markiiba, si daacad ah oo ammaan ahna u socota meesha aad ku socotid. Laga soo bilaabo Basel, muuqaalka kala duwan ee habka magaalada aad dooratay aad ayaa ugu fiican.
Ka soo kabashada Zurich laga bilaabo limousine
Ukunta Waxaad si fudud u isticmaali kartaa hal saac ka boodda Basel ilaa Zurich mid ka mid ah nooca limousines Jarmalka. Ka sokow jidadka dhexe ee magaalada Roma, qaab dhismeedka ugu casrisan ee Europaallee iyo taariikhda ugu weyn ee taariikhda dhaqanka ee Swiserland ayaa ku sugaysa halkan qosolka caanka ah ee Landesmuseum Zurich. Ugu danbeyn, laakiin ugu yaraan, daaqada dunnida caanka ah ee Chagall ee muraayadda ee Frauenmünster ee Zurich waa gabi ahaanba aan la iloobi karin qof kasta oo soo booqday.
Ma jeclaan laheyd inaad isku duba rido safarka magaalada Zurich oo leh khibrad aad u weyn? Fikrad wanaagsan! Zurich waxay caan ku tahay martida adduunka oo idil ee loogu talagalay inay ka mid noqdaan munaasabadaha gaarka ah, dukaamada qaaska ah iyo dukaamada kuwa ugu fiican. Kuwa kale ee Christa de Carouge, Fabric Frontline, Hannes B. iyo Könix waxay joogaan halkan halkaan, waxaanay la imaanayaan naqshad dharka, dharka iyo kabaha. Bandhigga Swiss Casino ee magaalada Zurich ayaa ku adkaata soo socda dhacdooyinka xiisaha leh ciyaaraha iyo tartamada kala duwan. Iyo taageerayaasha kubadda cagta ee kubadda cagta, Zurich waxay kugu martiqaadeysaa matxafka caanka ah ee Kubadda Cagta aduunka.
Safarka Magaalada Mulhouse Ville ee Limousine
Mulkiilaha Faransiiska Faransiiska - kaliya nus saacad ka socota Basel - wuxuu la wadaagaa Basel iyo Freiburg garoonka garoonka caalamiga ah ee EuroAirport. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheena ganacsigu waxay si joogto ah u adeegsadaan adeeggeena kala soocista garoonka Basel ilaa goobta ganacsiga ee Mulhouse Ville ee Alsace. Magaaladda xuddun u gudubta ee gobolka ayaa si gaar ah ugu guuleystay 18. Century oo ah horjooge ka mid ah isbedelka warshadaha Faransiiska leh warshadaha textile ee muhiimadda weyn. Iyadoo la eegayo shaqaalaha 10.000, Peugeot waa shaqo-bixiyaha ugu weyn ee Alsace. Mulhouse Ville waxa uu la yaabay kala duwanaansho aan kala go 'lahayn oo udhexeeya kaniisadaha taariikhiga ah iyo kaniisadaha dhexe ee caadiga ah iyo amarro kala duwan, Matxafka daabacaadda Fabric iyo Matxafka Qaranka Cité de l'Automobile.
Intaa waxaa dheer in magaalooyinka Switzerland, Jarmalka iyo Faransiiska, waxaan sidoo kale dabcan kuugu hanjabeyneynaa magaalooyinka kale. Waxaad ka heli doontaa liiska goobaha la doortay ee ku yaal boggayaga internetka, halkaas oo aad sidoo kale ka heli doonto qiimaha macaamilkayaga. Waxaan rajeyneynaa adigaaga jaale Online ama wicitaankaaga + 41 78 861 35 50.
Waxaa lagu calaamadeeyay: Gaadiidka garoonka Basel garoonka Shuttle adeegga limousine biririf magaalada
taxi.flughafen April 6, 2017 April 6, 2017 Uncategorized Faahfaahin la'aan
← BASELWORLD 2018 - Safar raaxo leh Basel Adeeg Basel